Ahmiyada Biyaha Bariiska Ay U Leeyihiin Jidhka Iyo Timaha Dumarka (TIJAABO CILMI AH) - Daryeel Magazine
Kadib markii ay bateen oo faraha ka baxeen daawooyinka la isku qurxiyo ee jidhka iyo timahaba loo isticmaalo kuwaas oo suuqyada soo buux dhaafiyay ayaa waxaa dad weynaha gaar ahaan haweenka ku adkaaday inay kala saaraan oo oo kala doortaan nooca ku habboon jidhkooda ee ay ku kalsoonaan karaan. Taas darteen ayaa culimada dhanka isqurxintu waxay bilaabeen inay ku taliyaan suurta galnimada in la isticmaalo waxtaabo natiijo wacan keeni kara oo guriga lagu diyaarsan karo kuwaas oo baddal u noqon kara daawooyinka daawooyinka kiimikada u badan ee isqurxinta loo isticmaalo.
Culimadu waxay soo jeediyeen ahmiyadda ay biyaha bariisku u leeyihiin quruxda jidhka iyo timaha haweenka. Biyahaa oo ah kuwo laga miirayo bariiska marka la karinayo waana tijaabo cilmi oo lagu ogaaday inay biyaha bariisku yihiin waxyaabaha ugu mudan ee marka lagu maydho jidhka joogteyn kara muuqaalkii dabiiciga ahaa ee haweeneyda iyagoo door weyna ka qaadanaya ka ilaalinta finanka iyo haaraha wajiga, halka sidoo kalana ay timaha ka dhigayaan kuwo furfuran.
Baadhitaanno laga sameeyay biyaha maraqa ah ee kasoo baxa bariiska waxaa kasoo baxday inay muddo qarniyo ah ay beeraleyda ku noolayd qeybo ka mid ah qaarada Asia ay haweenkoodu isticmaali jireen iyagoo ku maydhi jiray wejiyadooda, jidhkooda kale iyo timahoodaba.
Khubaradu waxay isku raacsanyihiin in biyaha bariiska laga soo saaro marka uu karsamayo ay ku jirto maado faa’iido weyn u leh dhalaalka jidhka iyo timaha xilli si fudud loogu diyaarsan karo guriga dhexdiisa oo aad si jaban ku heli karto islamaraana aad ku maydhi karto jidhka iyo timahaba.
Maadada la yidhaahdo “Inositol” ee ku jirta biyaha bariiska waxay ka hortagta burburka timaha waxayna caawisaa koritaankooda.
W/D: Xuseen Aadan Yuusuf (Xuseen Kurdi)
Ku Maydhashada Biyaha Kulul Waxay Dhibaatooyin Ku Keenaan Maqaarka Jidhka VIDEO: Talefannada iPhone S6 Iyo S6 Plus Oo La Ogaaday In Ay Adkaysi Badan U Leeyihiin Biyaha Hababka Jidhka Iyo Timaha Loogu Qurxiyo Timirta Faa’iidooyinka Saliida Saytuunka Iyo Sida Loogu Qurxiyo Jidhka & Timaha